03 Nederland iyo Yurub - Ku soo dhowow Nederland
Waddamada Yurub aad bay u kala duwan yihiin. Xataa luuqadahoodu way kala duwan yihiin. Luuqadaha ugu muhiimsan ee Yurub waxay u kala qaysamaan Germaani, Roomaan, iyo Slaavish. Luuqada Dutch-ka ee Nederland ku hadasho waa Germaani, sida Ingiriiska iyo Luuqada Jarmalka. Waxyaalo badan ayaa Yurub qarniyadii la soo dhaafay iska bedeley. Berigii hore waddamo badan oo Yurub ahi Masiixi ayay ahaayeen, laakiin hadda dad badan oo Yurub ku nooli diin ma leh.
Dagaalkii labaad ee dunidda kaddib Nederland waxay go'aansatay inay wada-shaqayn dheeraad ah la yeelato waddamada kale ee Yurub. Wada-shaqayntani waxay noqotay mid hir-gashay. Dhaqaalihii ayaa koray. Hadda 27-ayaa ka tirsan isu-tagga Yurub. Nederland waxay lahaan jirtey lacag u gaar ah, oo la odhan jirey Gilder, taasoo janaayo 1-deedii lagu beddeley lacagta Euro-da. Lacagtan cusub oo lacag ay isticmaalaan 16 waddan oo isu-tagga Yurub ah, kuwaasoo lagu magacaabo 'Eurozone' ama waddamada isticmaala lacagta Euro-da.
Waddamada isu-tagga Yurub waxay ku fadhiyaan dhul le'eg 4-malyuun oo kiilomitir oo isku wareeg ah, taasoo u dhiganta shan meeloodow laba meelood, marka la barbardhigo waddanka Maraykanka, laakiinse tiradda isu-tagga Yurub ku nool ayaa 60% ka badan kuwa Maraykanka ku nool. Tiradda dadka isu-tagga Yurub ku nool waxay gaadhaysaa ilaa 500 oo milyuun oo qof. Tiro ahaan waxaa keliyoo ka badan dadka ku nool Shiinaha iyo Hindiya. Xagga dhaqaalaha isu-tagga Yurub wuxuu dhoofiyaa ama soo dejiyaa 20% dhaqaalaha adduunka.
Baarlamaanka Europe waddan kastoo isu-tagga ku jira dad baa ugu jira, baarlamaankaasoo si tartiib ah awood u soo yeelanaya. Laga bilaabo sannadka 2010 isu-tagga Yurub waxay yeelatay jaggo cusub oo noqonaysa Madaxweynaha isu-tagga Yurub. Jaggadan cusub waxaa loo magacaabay ninka reer Belgium ee magaciisa la yidhaahdo Herman Van Rompuy. Baarlamaanka Yurub waxaa fadhigiisu yahay Straatsburg(Faransiiska), Brussel(Belgium), iyo Lexumburg.
Dad badan oo reer Nederland ah ayaan doonayn kamid ahaanshaha isu-tagga Europe. Waxay ku doodayaan in lacag badani Nederland kaga baxdo, wax yarna ka soo galaan. Waxay kaloo leeyihiin noloshii ayaa qaali noqotay kaddib samayntii lacagta Euro-da. 2005-tii afti loo qaaday dastuurka isu-tagga Yurub dadka reer Nederland way diideen. Waxay aaminsan yihiin in wada-shaqaynta Yurub ay fiican tahay, laakiinse Yurub oo dhan mid noqotaa aanay wanaagsanayn. Waxay kaloo dad badani aaminsan yihiin inaanay isu-tagga Yurub faraha la soo gelin xeerarka debecsan ee Nederland ka dejisey isticmaalka daroogooyinka khafiifka ah, iyo ka ku saabsan in qofka aad u jirani uu xuquuq u leeyahay inuu dhimasho ka dalbadoo dhakhaatiirta (euthenasiewetgeving). Dad badan oo kale ayaa welwel ka qaba shaqaalaha ka imanaya waddamada cusub ee Yurub ku soo biiray, sida Poland, Bulgaariya iyo Roomaaniya. Dadkani waxay ku doodayaan inay shaqaalaha waddamadan ka yimaadaa shaqooyinka dadka reer Nederland ka qaadanayaan.